एकाएक किन आक्रोसीत भए उदय !-Nagarikaawaj.com
एकाएक किन आक्रोसीत भए उदय !
सोमवार, साउन १२, २०७१
बुटवल १२ साउन । नेपालको चलचित्र क्षेत्र वदनाम भयो, नेपाली चलचित्रहरु चल्नै छाडे, चलचित्र क्षेत्र वढि भल्गर वन्दै गए । यस्तै यस्तै खालका टिकाटिप्पणिहरु नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा चलिरहेकै वेला नेपाली चलचित्रका एक हस्तीले भने एक्कासी आक्रोस व्यक्त गरेका छन । चलचित्र निर्माता प्रदिप कुमार उदय सोमवार एक्कासी किन त्यसरी झोक्कीए त्यो उनैलाई थाहा होला । को सँग किन र कसरी त्यसरी खरो रुपमा रिसाएका हुन भन्ने कुरा उदयले खुलाएनन ।
सम्भवत चलचित्र कोहीनुरको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालको समग्र चलचित्र क्षेत्रको बारेमा त्यस्ता केही टिकाटिप्पणि आएपछि झोक्कीएर उदयले आफ्नो फेसवुक वालमा पोष्ट गरेको हुन सक्छ । उनले लेखेका छन, –‘हामी हाम्रो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई किन बदनाम गर्ने कोशीश गर्दै छौ ? किन हामी एक अर्कालाई सम्मान गर्न जान्दैनौ ? किन सधैं अर्काको नकारात्मक कुरा मात्र अगाडि ल्याउछौ ?’
उनले आफ्नो वालमा यो क्षेत्र भित्र धेरै सकारात्मक कुराहरु पनि भएको र त्यस्मा हाम्रो नजर किन पर्दैन भनेर प्रश्न पनि तेस्राएका छन ।
यही क्षेत्रलाई पेशा बनाएर बसेका चलचित्रकर्मीहरु किन यही क्षेत्रलाई नराम्रो भन्दै हिड्छौं ? उनले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरे ।
उनले भने, ‘एक पटक हामी सबैले सधैं सकारात्मक कुरा गरेर हेरौ त, यो क्षेत्र कस्तो सम्मानजनक क्षेत्र बन्छ अनि यो क्षेत्र सम्मानजनक भयो भने के हामी पनि सम्मानित हुँदैनौ अनि यो प्रयासको थालनी किन नगर्ने’ उनले सबैले प्रतिबद्दता जनाउदै यो क्षेत्रलाइ मर्यादित र सम्मानित बनाउन आग्रह समेत गरेका छन ।